XOG LA HELAY: Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo xilka la qaadayo & Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Baydhabo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG LA HELAY: Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo xilka la qaadayo...
XOG LA HELAY: Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo xilka la qaadayo & Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Baydhabo
Illo xog ogaal ah oo ku sugan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu wado qorshe xilka uga qaadayo qaar ka mid ah Golihiisa Wasiirada.
Wasiirada loo badinayo iney qaado seefta Xasan Cali Kheyre ama xilka laga qaado waxaa ka mid ah Wasiirka arrimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye,Wasiirka Howlaha Guud Cabdi Aadan Hoosow oo xilkaasi ku hantay ka dib markii uu iska casilay Wasiirkii hore ee Wasaaradaasi C/fitaax Geesey iyo Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiir Maareeye ayaa la sheegayaa in loo wado Wasaaradda warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya oo hadad uu wasiir ka yahay Daahir Maxamuud Geele.
Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa laga dhowrayay inuu isku shaandheyn ku sameeyo Golihiisa Wasiirada,taasi oo qeyb ka ah Heshiis dhexmaray Ra’iisal wasaare Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh si Liiska Wasiirada cusub uga soo dhex muuqdaan shaqsiyaad ku dhow Guddoomiye Mursal.
Sidoo kale,wararka qaar oo aan heleyno ayaa sheegaya in Liiska Wasiirada cusub suurta gal tahay iney ka soo muuqdaan shaqsiyaad mucaaradsan Dowladda Soomaaliya si loogu aamusiyo.
Wasiirka arrimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa xilkan loo magacaabay bishii January 4-2018,ka dib markii xil ka qaadis lagu sameeyay Wasiirkii Wasaaradaasi Cabdi Faarax Siciid Juxa.